पत्रकार खेम भण्डारी र गणेश भट्ट २८ घण्टापछि रिहा – Media Kurakani
June 18th, 2017 Media Kurakani Media News
कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरबाट प्रकाशित हुने ‘दैनिक मानसखण्ड’ पत्रिकाका प्रकाशक एवं प्रधान सम्पादक खेम भण्डारी र कार्यकारी सम्पादक जी. भट्ट रिहा भएका छन्। प्रहरीले भण्डारी र भट्टलाई २८ घण्टापछि आइतबार हिरासतमुक्त गरेको हो।
पत्रिकामा प्रकाशित समाचार सामग्रीसँग सम्बन्धित उजुरीको अनुसन्धानका लागि भन्दै प्रहरीले उनीहरूलाई शनिबार दिउसो पक्राउ गरेको थियो। पढ्नुस् : प्रहरीले किन पक्राउ गरेको थियो उनीहरूलाई?
हिरासतमुक्त भएपछि पत्रकार भण्डारीले प्रेस स्वतन्त्रताको लडाईँ जारी रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
प्रधान सम्पादक र कार्यकारी सम्पादक दुबै नहुँदा ‘दैनिक मानसखण्ड’ पत्रिकाको प्रकाशन रोकियो।
प्रधान सम्पादक भण्डारीले पत्रिका बन्द भएको क्षतिपूर्ति दावी गर्ने बताएका छन्।
पक्राउ परेका अर्का पत्रकार गणेशदत्त भट्टले रिहा भएपछि प्रश्न गरेका छन्- ‘पत्रिकामा समाचार प्रकाशित भएपछि समाचारसँग हरेक सम्बन्धित पक्षले उजुरी दिने बित्तिकै प्रहरीले हरेक पत्रकारलाई थुनामा राखेरै अनुसन्धान गर्ने हो भने प्रेस स्वतन्त्रताको हालत के हुन्छ?’
अनुसन्धानका क्रममा पत्रकारद्वयले अपराध गरेको खुल्न नआएकाले हाजिरी जमानतमा छोडिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख प्रकाशबहादुर चन्दले ‘सम्पादक भण्डारी र कार्यकारी सम्पादकलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्दा र बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्दा कुनै फरक नपर्ने भएकाले छोडेको’ बताएको दैनिक मानसखण्डको अनलाइनले जनाएको छ।
उच्च अदालतबाट राहत
पत्रकारद्वयलाई पक्राउ गरिएको घटनामा उच्च अदालत दिपायलका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद बस्यालले ‘प्रचलित कानुनको औचित्य समाप्त नहुने गरी कारबाही गर्न’ निर्देशनात्मक आदेश दिएका छन्।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरलाई सोमबार दिएको उक्त निर्देशनात्मक आदेशमा भनिएको छ- ‘अब आइन्दा प्रचलित कानुनको औचित्य समाप्त नहुने गरी विवेकसम्मत तरिकाले कानुनद्वारा प्रदत्त अपराध अनुसन्धानको जाहेरी लिने र मौका तहकिकात गर्ने काम कारवाही गर्नु, गराउनू।’ आदेशको पूर्ण पाठ आउन बाँकी छ।
नेपाल पत्रकार महासंघ कञ्चनपुर शाखाका निवर्तमान अध्यक्ष लक्ष्मण तिवारीले रिट दायर गरेका थिए।
दुई युवती पक्राउ परेको घटनामा ‘दैनिक मानसखण्ड’ ले पक्राउ परेकाहरूको पक्षमा आफूलाई उभ्याएको थियो भने हात धोएर प्रहरीलाई गलत साबित गर्न लागिपरेको थियो।
तर जसलाई निर्दोष दावी गर्दै पत्रसकामा शृंखलाबद्ध समाचारहरू प्रकाशित भए उनीहरूकै आफन्तको उजुरीका आधारमा पत्रिकाका प्रकाशक एवं प्रधान सम्पादक र कार्यकारी सम्पादक पक्राउ परे। यो ट्‍विस्ट कसरी आयो भन्ने प्रश्न भने अनुत्तरित नै छ।
यसबारे पत्रिका भन्छ-
यस्तो छ एसपी चन्दको नियत ! शीर्षकको समाचार सामग्रीमा मानसखण्ड दैनिकले ‘घटना निकै नाटकीय र योजनाबद्ध देखिएको’ दावी गरेको छ।
‘आफ्ना कर्तुतका बारेमा समाचार प्रकाशित गरेपछि एसपी चन्दले मानसखण्ड दैनिकका पत्रकारद्धय भण्डारी र भट्टलाई निशाना बनाएका हुन्’, उक्त समाचारमा भनिएको छ। पत्रिकाले जिल्ला प्रहरी प्रमुख चन्दले नै पक्राउ परेकी युवतीका बाबुलाई जबर्जस्ती उजुरी दिन लगाएको आरोप लगाएको छ। समाचारमा भनिएको छ-
युवतीहरुको नाटकीय रुपमा गरिएको गिरफ्तारी र एसपीको नियतका विषयमा पत्रकार भण्डारीले लगातार समाचार लेखेकै कारण तारो बनाइएको देखिन्छ। घटनामा युवतीका बाबुलाई समेत एसपी चन्दले जबर्जस्ती पत्रकारविरुद्ध उजुरी दिन लगाएको देखिएको छ। मानसखण्डले पीडितहरु युवतीहरूको पक्षमा वकालत गर्दै आएको थियो। जबकि उनीहरुलाई युवतीकै बाबुको उजुरीको हबला दिँदै पक्राउ गरियो। यो सरसर्ती षडयन्त्र र योजनाबद्ध देखिन्छ। प्रहरीले नै बाबुलाई उजुरी दिन बाध्य बनाइएको देखिन्छ।
असार १ गते उजुरी परेको भनिए पनि उनीहरुलाई शनिबार पारेर पक्राउ गर्नुले एसपी चन्दको नियतमा शंका गर्ने ठाउँ देखिएको छ। कार्यालय खुल्ने दिन पक्राउ गर्दा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हालेर रिहा हुनसक्ने भएकाले दुःख दिने नियतले पत्रकार भण्डारी र भट्टलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
पत्रिकाले प्रश्न गरेको छ-
मानसखण्डका सम्पादक खेम भण्डारी र कार्यकारी सम्पादक गणेश भट्टलाई शनिवार दिन पारेर पक्राउ गर्नुको रहस्य के छ? असार १ गते बिहीवार युवतीका बाबुले दिएको उजुरीलाई तत्कालै दर्ता गएिको मुद्दामा प्रहरीले तत्कालै किन उनीहरूलाई हिरासतमा लिएन? शुक्रवार कुरेर शनिबार अड्डा अदालत बन्द हुने दिन मौका छोपी हिरासतमा लिनुको अर्थ के छ?
कहाँ छन् दुई युवती?
पत्रिकाका अनुसार पक्राउ परेका दुई युवती अहिले पनि प्रहरी हिरासतमा छन् र उनीहरूलाई पनि सार्वजनिक अपराधको मुद्दा लगाइएको छ। पक्राउ परेका दुई युवतीमध्ये एकका बाबुले गरेको उजुरीका आधारमा पत्रकारद्वय भण्डारी र भट्ट पक्राउ परेका थिए। उजुरी दिने व्यक्ति भने आफ्नो जिल्ला बैतडी फर्किसकेको पत्रिकाले लेखेको छ।
‘आफ्ना दुई छोरीलाई प्रहरीले सार्वजनिक मुद्दा चलाएको अवस्थामा बैतडी घर भएका खेमराज अहिले उजुरी दिए लगत्तै पुनः बैतडी फकिएका छन्’, पत्रिका लेख्छ, ‘दुई छोरी हिरासतमा रहेको बेला उनले अड्डा अदालत धाउनुको सट्टा उनकै छोरीकै पक्षमा वकालत गर्ने पत्रकार विरुद्ध नै उजुरी दर्ता गरेर किन बैतडी फर्किए? उनका दुई छोरी अझै पनि प्रहरी हिरासतमा छन्। उनीहरुलाई छुटाउन वा मुद्दा मामिलाका विषयमा वकिलसँग सम्पर्क नगरी विशुद्ध पत्रकार विरुद्ध उजुरी लेखेर किन फर्किए?’
नोटः यसअघि प्रहरीले पक्राउ परेका दुई युवती मध्ये एकजनाका बाबुले प्रहरीमा उजुरी दिएको जनाएको थियो। तर मानसखण्डको पछिल्लो समाचारमा उजुरीकर्ताका दुई छोरी भनिएको छ। यस विषयमा अस्पष्टता देखिएको छ।
Tags Dainik Manaskhanda Ganesh Bhatta Khem Bhandari Press Freedom
किन पक्राउ परे ‘दैनिक मानसखण्ड’ का पत्रकार भण्डारी र भट्ट? यस्तो छ घटनाको नालीबेली »
« राष्ट्रपतिको कार्यक्रममा पत्रकारलाई ड्रेस कोड? ‘मर्यादित पोशाक’ को बहस
किन पक्राउ परे ‘दैनिक मानसखण्ड’ का पत्रकार भण्डारी र भट्ट? यस्तो छ घटनाको नालीबेली – Media Kurakani (#)
[…] न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका भण्डारी रेडियो महाकालीका कार्यकारी निर्देशक पनि हुन्। भट्ट कारोबार दैनिकका कञ्चनपुर सम्वाददाता पनि हुन्। अपडेटः पत्रकार खेम भण्डारी र गणेश भट्ट २८ घण्… […]
LeaveaReply to किन पक्राउ परे ‘दैनिक मानसखण्ड’ का पत्रकार भण्डारी र भट्ट? यस्तो छ घटनाको नालीबेली – Media Kurakani Cancel reply